Fundisa ingane ukuba icabangele
Udinga ukuqala kusuka kumntwana kanye, kodwa ungakwenza hhayi ngonyaka nonyaka, kodwa ngaphambi kwesikhathi, izinyanga eziyisithupha. Qalisa kabusha konke okunamandla: amehlo amabili nendlebe, izandla ezimbili nezinyawo, impumulo eyodwa, njll. Ingane ithanda ukubuka futhi ixoxe ngokuphindaphindiwe, futhi ubuza:
"Uphi imilenze yakho?". Uzobonisa, futhi uzosho ukuthi:
"U-Kolya unemilenze emibili!" - futhi wengeze: "Nansi enye futhi nangu owesibili." Ngakho wena nomntwana uzoqala ukutadisha i-akhawunti kusuka komunye kuya kokubili.
Ibhukwana eliphelele kunazo zonke lokufundisa izibalo yiminwe. Qala ngesiphathi esisodwa. Qalisa kabusha iminwe yakho, ufihle abambalwa bese ubala ukuthi kusele kangakanani. Fihla konke futhi ujwayele umqondo we-zero. Hlukanisa umunwe owodwa kusuka kwabanye bese uthola ukuthi lawo mahlanu ayingxenye eyodwa, emine nantathu. Bese ungeza ipeni lesibili. Umunwe owodwa wesandla sobunxele wavakashela iminwe yokunene, futhi iminwe eyisithupha yaba. Kwabe sekufika enye, futhi kwakunezinsuku eziyisikhombisa, njalo njalo.
Qala kabusha konke okudlalayo: "Lapha uhlala nenkukhu, futhi lapha - izindlovu ezimbili". Noma ubuze: "Zingaki izilwane ezizohamba ngesitimela?" Wena ngokwakho uthi ingane yaqala ukuqonda indlela yokuphendula lo mbuzo: "Amakati amabili, amahhashi amathathu, ikamela elilodwa, njll." Dala izimo lapho ingane kufanele into yokubala noma ukunikeza elinye ithoyizi noma umuntu inani elifanele lezimbali, ama-apula - noma yini.
Ngokushesha, emdlalweni, unganika izici zezenzo zezibalo, ukwethula ukwakheka kwenombolo. Okusho ukuthi, wenza umsebenzi obusweni bakho futhi uzixazulule wena phambi kwengane. Isibonelo: "Indlovu yafika ekamela ukuvakashela umkhumbi, bese kuthi izinkabi ezimbili. Futhi le nkamela yayinezivakashi ezintathu "noma" Le ntombazane yabhaka ama-pie amabili ngejamu kanti amabili neklabishi, igoqa wonke amaqebelengwane amane ebhasikisini futhi yangena emahlathini kuya emathunjini ajwayelekile (konke lokhu okudlala ngamathoyizi noma ndawonye ukudlala ngezindima). U-woodcutter wavakashelwa abazingeli ababili. Intombazane yenza itiye, futhi yaqala ukuyiphuza ngamapayipi. Kwabe sekuthi wonke umuntu wathola iphaya elilodwa. Njengoba kwakukhona abantu abane nama-pie, kwakulingana. Ungagxila ukunakwa kwengane kulokho okudingayo ukuba ubale, khumbula noma ulalele. Vumela ingane ithathwe ngumdlalo, futhi konke kuzokhunjulwa ngokwayo. Ungesabi ukunikeza umqondo wokuphindaphinda nokuhlukana: sakha izindlu ezintathu zamamitha amane - ama-cubes ayishumi nambili asele! Ake sihlukanise izilwane eziyisithupha zibe izilwane ezintathu, ezimbili ngayinye!
Indodakazi yami yathandana nomfana omdala
Fundisa ingane ukulawula imizwelo emibi
Ukufunda isiNgisi emidwebo yezingane
Indlela yokufundisa ingane ukuba idle ngokuzimela?
Lokho abantu abakushoyo ngokumisa unomphela wesifazane
I-OBRANI - brand brand entsha
Ukushaja okuwusizo kwezandla, izinyawo nokubuya kwengane
Ungayikhulula kanjani ikhanda lakho kusuka ku-migraine kumathempeli wakho?
Iholide lomndeni nezingane
Imishanguzo eyengeziwe enganeni: kungani edingekayo
Izifo zabantu ezifa, ukuvimbela kwabo
I-powder fryable ye-oily kanye ne-skin combination
Izinwele Zobuhle: I-Oil Bey
Ushizi othosiwe ku-nori
Umqondo wokucindezeleka nendlela yokuwunqoba ngayo
I-TOP-3 imihlobiso yezinwele ezishintsha kakhulu
Isaladi lesithelo "Margarita"
Izinsimbi ze-Air kusuka ebuhlalu kanye nobuhlalu ngezandla zomuntu siqu